दिपेन्द्रजी, किन विभेदको एकपक्षीय गीत गाउनुहुन्छ?
निराजन शर्मा/ रामशरण घोरासैनी -
तपाईंहरुलाई श्रीमतीको मात्रै कति साह्रो माया लागेको? बिहे गरेर आएको भोलिपल्टै नागगरिकता दिलाएर मात्रै भएन! 'कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा' भनेजस्तो ‘अंगीकार’ गरेको नागरिकलाई ‘वंशज’ सरह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सभामुख, प्रदेशसभा प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुखजस्ता केही संवेदनशील पद पनि चाहिएको त! लौ न आफ्ना दिदी बहिनीहरुका लागि पनि केही आवाज उठाउनुस्! विचरीहरु विवाह गरेर गएको ७/७ वर्षसम्म विनानागरिकता बाँच्न विवश हुन्छन्। जेनेभासम्म गएर हुँदै नभएको ‘विभेद’ को गीत गाउनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरुका लागि दुई शब्द छैन तपाईंहरुसँग? राखीले पोल्दैन?
ओलीज्यूलाई पत्रः संविधान संशोधन गर्दा के बिग्रिन्छ?
-दिपेन्द्र झा -
विगत १० वर्षमा भएको मधेस आन्दोलनले के पुष्टि गरेको छ भने न त खस–आर्यले मधेसीलाई र न त मधेसीले नै खस–आर्यलाई ‘बाइपास’ गर्नसक्छ। यी दुईबीचको संवाद, सहअस्तित्व र सहकार्यको विकल्प छैन।
स्थानीय तह पुनर्संरचना कि सिंगारपटार मात्र?
स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने वा गर्ने अधिकांश काम अहिले सिंहदरबारबाट भइरहेको छ। यसो गर्दा केन्द्रमा बसेर राजनीति गर्ने वा उच्च तहका प्रशासकहरूका लागि प्रशस्त लाभका अवसर पनि सिर्जना भएका छन्। आफ्ना जिल्ला तहका ठालू नेता र आसेपासेले मागेबमोजिम योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई फोन गरेर बाटो, पुल र सिमेन्टका गेट बनाउने योजना स्विकृत गराइदिँदा पछि चुनावलाई पनि सजिलो हुने नै भयो। यो विकृतिको जालो पन्छाएर पुनर्संचनामा राजनीतिक इच्छाशक्ति खोज्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम हो, जसको मारमा पुनर्संरचना आयोग परेको छ।
इलाकालाई स्थानीय तह बनाउनु असान्दर्भिक
दिनेश थपलिया -
सबै तथ्य प्रमाण, अध्ययन, अवस्था, विश्लेषण र नतिजाको आधारमा मौजुदा इलाकालाई स्थानीय तहमा रुपान्तरण गर्न सम्भव छैन, आयोगले बनाएको आधार र मापदण्ड बमोजिम प्राविधिक समितिले सिमा निर्धारण गर्दा कुनै इलाका गाउँपालिका बन्न पनि सक्छ भनी स्पष्ट गर्न आयोग स्वयं क्रियाशील हुनु पर्छ। एउटा संविधानिक आयोगले आफू अनुकुल निर्णय आएन भनेर आत्तिनुपर्ने र त्यस्तो निर्णय हुबहु लागू गर्नुपर्ने हुँदैन।
लोकमानसँग नेपाली प्रेस किन डराउने?
लोकतन्त्रले कुनै पनि समाजमा विकासको, समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन। कुनै पनि समस्या समाधानको ग्यारेन्टी गर्दैन। तर, एउटा कुराको सदैव ग्यारेन्टी गर्छ र गर्नुपर्छ, त्यो हो कुनै पनि विषयमा संवादको ग्यारेन्टी। लोकमानको विषयमा भने तपाईंहरू कुरै नगर्ने? सुतुरमुर्गले झैं बालुवामा टाउको लुकाइराख्ने? लोकमानले संविधानको चरम उल्लंघन गरेर अघि बढ्दा त्यसको उपचार खोज्ने संविधानले व्यवस्था गरेको एउटा मात्र थलो संसदमा किन छलफल नहुने?
हिजो शाही शासनविरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका सञ्चारकर्मीहरू आज त्यही शासनको एउटा कमजोर पुर्जासामु झुक्छन् भन्नेमा मलाई किञ्चित विश्वास छैन। त्यसैले नेपाली प्रेस यो परीक्षणमा खरो उत्रिनेछ भन्नेमा मेरो विश्वास छ। तर, म यही कुरा राजनीतिज्ञहरूका बारेमा उही विश्वासका साथ भन्न सक्दिनँ। २०६२/६३ पछि हाम्रो राजनीतिले जुन चरित्र ग्रहण गरेको छ, त्यसले विश्वास र भरोसा गर्ने ठाउँ आफैं राखेको छैन।
पञ्चायती संरचना ब्युँताइएको होइन
आनन्दप्रसाद ढुंगाना -
हाम्रो पार्टी पञ्चायतविरुद्ध लडेको पार्टी हो। पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा बलिदान गरेर आएका छौं। अनि कसरी पञ्चायती संरचना र सोचलाई निरन्तरता दिउँला त? इतिहास बुझेर मात्रै तर्क गर्नुपर्छ।
नुरूल कविरसँग नयाँदिल्ली
दक्षिण एसियामा भारतले कसैलाई केही दिन जान्दैन। ऊ कसैलाई केही दिन चाहँदैन। अरूबाट लिन मात्र चाहन्छ। किनभने भारत भनेको त्यो संस्थापन हो जसमा ब्राह्मणको राज छ।
त्यो साँझ पनि माथि कश्मिरमा कफ्र्यु जारी थियो। भारतको भित्रभित्रै पाकिस्तानसँग तनावका लक्षण देखिँदै थिए। मोदीले ‘क्षेत्रीयतावाद’ भन्ने गरे पनि सार्कको अस्तित्वमै आशंका चुलिनु नै थियो। (विस्तृतमा)
मधेसको प्रतिनिधित्व घटाउने चलखेल
तीन दलका ठूला नेताले हचुवाको भरमा यो निर्णय गर्नुभएको छ। आयोगको काम एउटा तहमा पुगेको बेला त्यसलाई पनि ख्यालै नगरी तीन दलले यो निर्णय आएको छ। यसले आयोगलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ। आयोगले अहिलेसम्म गरेको परिश्रम खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिलो संविधानसभा गठन भएदेखि नै विज्ञहरू र यस क्षेत्रका सरोकारवालाले गरिरहेको अध्ययन र बसहको पनि धज्जी उडाएको छ। त्यसैले, आफूलाई ब्रम्हा, विष्णु, महेश्वर ठान्ने तीन दलले द्वन्द्व बढाउने काम गरेका छन्।
इलाकालाई स्थानीय तहमा रूपान्तरित गर्ने मजाक
प्रा. पिताम्बर शर्मा -
ध्यान नपुर्‍याई गरिएको स्थानीय तहको पुनसंरचनाले हामीलाई प्रतिनिधित्वको पुरानै परीपाटीमा लैजान्छ। यो त संघीयताको नाटकमात्रै हुन्छ। बुझ्न नसकिने कुरा त के भने राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको नारा दिएर जनयुद्ध गर्नेहरू नै यसमा मतियार छन्।
विद्यमान इलाकाहरू २०२० को दशकको जनसंख्याको वितरण, पहुँचको स्थिति, राजनीतिक उचारचढाव र त्यसबेलाको राज्यको नीति तथा सिद्धान्तकै प्रतिबिम्ब हुन्। अहिले यी सबै कुरामा आकाश-जमिनको अन्तर आइसकेको छ। स्थलीय अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो परिवर्तन आएको छ। जनसंख्याको वितरण फेरिएको छ। पहुँचको स्थितिमा पनि व्यापक बदलाव आइसक्यो।
लडाकु जाति, गोर्खा भर्ती र राजनीतिक नारा
जंगबहादुरका भाइ रणोदीपका पालामा भर्ती अभियानमा सहयोग गर्ने भनिए पनि उनले आफ्ना कर्मचारीलाई सहयोग नगर भन्ने र अपाङ्गता भएका मानिसलाई भर्तीका लागि पठाइदिने जस्ता कार्य गरे। शमशेर खलक सत्तामा आएपछि भने द्विपक्षीय सम्बन्ध र भर्ती प्रक्रियामा केही परिवर्तन आयो। अंग्रेजले नयाँ शमशेरहरूको सत्तालाई समर्थन गर्ने र नेपालले भर्ती गर्न दिने भन्ने किसिमको समझदारी भएको देखिन्छ।
बिपीको विभक्त मानसिकताको भुमरी
सुवर्णजीलाई लेख्नुभएको चिठी र भोलासितको कुराकानीले एउटा कुरो प्रस्ट पारेको छ ः निर्वासित बिपीले विभक्त मानसिकताका साथ क्रान्तिको कुरा गर्नुभएको थियो। तर एउटा सिङ्गो पुस्ता त्यसको भूमरीमा अल्मलियो। इतिहासकारले ढिलोचाँडो त्यसको गहन अध्ययन गर्नेछन्।
गोविन्द केसी, भोला रिजाल र यो दसैं
पैसा कमाउन हैन सेवाका लागि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने डा रिजालको टोलीले आँफु जस्ता मेडिकल कलेजका संचालकहरुको स्वार्थ पुरा हुने गरी लाजै नमानी शुल्क झण्डै दोब्बर बनाउने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो । सम्भवतः हाम्रो तदारुक सरकारले यही शैक्षिक सत्रदेखि त्यसलाई लागू गर्नेछ।
बदलिँदा भारतीय शीर्षक
भारत जोडले आर्थिक शक्ति राष्ट्र बन्ने धुनमा अन्तर्राष्ट्रिय पखेँटा खियाउँदैछ, आन्तरिक रूपमा भने वेचैनी र विरोधाभाषहरू पनि उत्तिकै बढाउँदैछ। भारतले कस्तो विकास कसरी गर्दै जान्छ भन्नेले हामी छरछिमेक सोझै प्रभावित हुने नै छौँ। हुँदै गएकै छौँ। आकाशमा बादलहरू बदलिइसकेका छन्। जमिनमा बहिष्करण बढिरहेको छ।
घनश्याम भुषाल - नवौँ महाधिवेशनपछि हामीले पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको गठन गर्यौं। साँच्चै भन्ने हो भने दुई गुटका बीचमा सहमति गरेर हामीले त्यसो गर्यौं। दुवै गुटमा पदहरूको बाँडफाट भयो। त्यसले लामो समयसम्म रहेको अनिर्णयको अवस्थालाई समाधान त गर्यो तर हामीले बाँडफाँटको त्यस्तो तरिका अवलम्बन गर्दा कैयन् कमरेडहरूमाथि न्याय भएन। तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि गुटबन्दीमा आधारित त्यस्तो तरिका कसरी सुधार्ने हो भनेर छलफल गर्नुपर्थ्यो। त्यसो गरिएन।
हाम्रो भविष्य निर्धारण गर्ने प्रश्न
दिपेन्द्र झा - अहिले, अधिकार माग्ने मधेसीमाथि अर्को पनि प्रहार भइरहेको छ। राष्ट्रभक्त मधेशीलाई 'भारतीय' भन्ने आरोप लगाइदैछ। एउटा कुरा ख्याल राख्नुहोला, तपाईँले मधेसीहरुलाई भारतीय भन्दा अहिले मधेशका धेरै युवाले हामी नेपाली होइनौ भन्न शुरु गरेका छन्। आखिर कथित् राष्ट्रवादीहरुले विखण्डनको सोचलाई नै मलजल गर्ने हो।
हामी सुध्रिनै नसक्ने गरी बिग्रेका छैनौं
जीवन क्षत्री - अहिलेको लडाइँ लोकमानसित नभई उनलाई राजाको जस्तो भूमिकामा पुर्याएर उनको चर्को ज्यादतीबीच उनलाई त्यहीँ राखिछाड्ने र त्यो अवस्थाबाट सिर्जना हुने दण्डहीनताबीच आफूलाई अझ धनी बनाएर भविष्य सुरक्षित गर्न लालायित राजनीतिक नेतृत्वसँग हो। तर त्यो नेतृत्वमा लाचारी र आत्मस्वाभिमानको अभाव कति चर्को छ भने ऊ दण्डहीनता र कालो अर्थतन्त्रको पृष्ठपोषण गरेर समाजलाई अधोगतिमा लगाएको लाञ्छना स्वीकार्न तयार छ तर लोकमान वास्तवमा दोषी हुन् कि हैनन् भनेर संविधानले तोकेको प्रक्रियाबाट छानबिन सुरु गर्नसमेत तयार छैन।
नेपाली आफैंमा अपभ्रंश भाषा
प्रा.डा. शर्वराज आचार्य - संस्कृत भाषामा पाणिनिको व्याकरण र शिक्षाशास्त्रले व्याकरण मात्र होइन, वर्ण विन्यासको पनि संस्कार गरेको थियो । तर उल्लिखित नेपाली व्याकरण र नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ? हरुले नेपाली वर्ण विन्यासका क्षेत्रमा पाणिनिले झैँ शब्दलाई संस्कार गर्न सकेनन् । संस्कार गर्दा नेपाली उच्चारणलाई साथ दिन नसकेको कुरा शारदा पत्रिकाको सम्पादकीयले बहसमा ल्याएको देखियो।
किन साम्यवादी नायकहरुको पतन हुन्छ?
मुराहरि पराजुली - संसारमै सबैभन्दा बढी उपभोग गर्ने अमेरिका र युरोपको मन्दीको असर ढिलो गरी ब्राजिल पुग्यो। विश्व बजारमा विस्तारै ब्राजिली उत्पादनको माग र मूल्य घट्न थाल्यो। वैदेशिक आय कम हुँदै गयो, ब्राजिलले जति उत्पादन गथ्र्योे सबै खपत हुने गरी अर्थतन्त्रको निर्माण भएकै थिएन, संसारमा यस्तो कुनै मुलुक छँदा पनि छैन्। मन्दीले ब्राजिललाई समात्यो, धेरैले रोजगारी गुमाए, महँगी बढ्यो। जनताका लागि जे भन्यो त्यै गर्न सक्ने पार्टी र नेता लाचार देखा परे।
संघीयतामा जाँदा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था हटाउनुपर्छ
रुप खड्का - विभिन्न तहका सरकारले लगाउन सक्ने करसम्बन्धी अधिकारका बारेमा पनि सुधारको आवश्यकता छ। संविधान अनुसार निम्नानुसार दोहोरो लाग्न सक्ने स्थिति छ। दोहोरो कर लाग्नु राम्रो होइन। यसले कर परिपालन लागत तथा कर संकलन खर्च बढाउँछ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। यस सन्दर्भमा निम्नानुसार विभिन्न विकल्प हुन सक्छन्।
भाषामा अहिले उग्रवाद चाहिँदैन
बालकृष्ण पोखरेल - व्याकरणको परिवर्तन पुस्तैपिच्छे गर्ने कुरा होइन। सयौं वर्षमा केही कुरा फेरिन्छ भने त्यसलाई स्वभाविक रुपमा फेरिन दिनुपर्छ। नफेरिने भए मनुष्य मान्छे हुने थिएन, कनिष्ठ कान्छो हुने थिएन, मत्स्य माछो हुने थिएन। तर, भाषा त सुटुक्क फेरिने कुरा हो।
खै भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरु?
जीवन क्षेत्री - विश्वव्यापी रुपमा भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा संलग्न हुने ठानिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको अडान के हो? हामीले औंल्याएका लोकमानका क्रियाकलाप यदि उसलाई वास्तविक लाग्छन् भने ऊ कसरी यस्तो गम्भीर विषयमा मौन बस्न सक्छ? हैन, हामीले लोकमान प्रवृत्तिविरुद्ध चलाएको अभियान उसलाई ज्यादतीपूर्ण र संवैधानिक निकायको मर्यादामा आँच पुर्याउने खालको लाग्छ भने झन् ऊ कसरी मौन बस्न सक्छ? यदि संस्थाका रुपमा अदुअआले इमानदारीपूर्वक काम गरेजस्तो उसलाई लाग्छ भने त्यसको बचाउमा बोल्नु उसको कर्तव्य हुँदैन र?
मैले सोचेको र भोगेको लोकतन्त्र
प्रा. चैतन्य मिश्र - हामीलाई थाहा छ - नेपालमा असमानता छ, जग्गा कसैको धेरै र कसैको थोरै छ। तर, पनि नेपाल ८०-९० प्रतिशत मानिससँग जग्गाजमिन भएको मुलुक हो। यस्ता मुलुक संसारमा विरलै छन्। जग्गाले हरेक परिवारलाई आफ्नै खुट्टामा उभिने तागत दिन्छ। त्यो लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य तत्व हो। दासत्व भएको ठाउँमा लोकतन्त्र आउन सक्दैन। किनभने त्यहाँ स्रोतसाधन एउटाले कब्जा गरेको हुन्छ, अर्कोले श्रम मात्रै दिन्छ। थोरै बाँकी रहेका कमैया र हलियाजस्ता प्रथाबाहेक हामीकहाँ यस्तो नभएको धेरै भयो।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणअगाडि भारतको अनुदार 'अदुवा रणनीति'
सुदीप श्रेष्ठ - भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रमुख प्राथमिकता एकाएक अदुवा निकासी बन्न पुगेको छ। उनले किसानको जीवनयापनमा उब्जेको समस्या सल्टाउन अदुवा निकासी खुला गर्नुपर्ने मुद्दालाई नै जोडतोडले उठाउनुपर्ने हुन्छ। यो उनको बाध्यता पनि हो, आवश्यकता पनि। र, कुनै आश्चर्य भएन भने अदुवा निकासी खुला गरेबापत् भारतले आफ्नो स्वार्थको कुनै एजेन्डा नेपालबाट मनाउन खोज्नेछ। त्यो अवस्थामा नेपालको अगाडि दुइटा बाटो रहन्छ– भारतको सर्त मान्ने कि नेपाली अदुवालाई सिमानामै कुहाएर राख्ने? विगतको अनुभव हेर्ने हो भने यस्तो चेपुवामा परेका बेला भारतको सर्त मान्नुबाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प हुँदैन।
लोकमानसामु उभिने हुती भएका सांसद रहेनछन्
डा. गोविन्द केसी - लोकमानलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ। लगाइएन भने आन्दोलन सुरू हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिसकेको छु। लोकमानले सबै क्षेत्रमा नाजायज हस्तक्षेप गरेका छन्, लोकमानले गरेका भ्रष्टाचारका विषयमा पर्याप्त प्रमाण आइसकेका छन्। लोकमानको नियुक्ति नै गैरकानुनी छ। संसद नभएका बेला उनी नियुक्त भएका हुन्, संसद आइसकेपछि सुनुवाइ हुनुपर्नेमा भएकै छैन। त्यसकारण उनी गैरकानुनी हुन्। अख्तियारमा जान २० वर्षको विषयगत अनुभव हुनुपर्छ। उनको अनुभव १७ वर्षमात्र छ। अख्तियारले नै मुद्दा हालेको छ उनलाई, मन्त्रिपरिषदले पदमा जान अयोग्य ठहर्याएको थियो, यस्ता व्यक्ति कसरी त्यहाँ पुग्न सक्छन्? यी सबै गैरकानुनी तरिकाबाट भएका हुन्।
उदारवाद बायाँ ढल्केको हुन्छ, नवउदारवाद दायाँ
मुराहरि पराजुली - अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक पूर्ण समाजवादी वा पूर्ण पुँजीवादी हुन सक्दैन। समाजवादी वा पुँजीवादी झुकाव राख्नेसम्मको हुन सक्छ। हाम्रा साझा राजनीतिक वा आर्थिक चासोका विषयमा छलफल गर्दा कित्ता काटाकाट गर्ने गैरबौद्धिक प्रवृत्ति हाम्रो छ। हाम्रा कम्युनिस्टहरू यो रोगबाट बढी ग्रस्त छन्।
सलाइन चढाउन नजान्ने एमबिबिएस डाक्टर!
जीवन क्षत्री - जहाँ आफ्नो भलो मात्र हेर्ने मानिस सत्तामा छन्, त्यहाँ मदिरा उद्योग र मेडिकल कलेजबीच कुनै भेद नगरेर मनपरी गर्न छाडिएको छ। फलस्वरुप नाफा बढाउन जे जे गर्न मिल्छ, वैध वा अवैध, मेडिकल कलेजहरुले ती सबै गरेका छन्। त्यस्ता धेरै कडीमध्ये एउटा भनेको निरीह विदेशी विद्यार्थीहरुलाई फसाएर तिनबाट ठूलो नाफा असुल्नु हो।
किन बोल्दैनन् गंगामायाबारे महिला अधिकारकर्मी?
चरण प्रसाई - एकै समयकालमा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख समेतका पद नेपालमा पहिलो पटक महिलाले सम्हालेका छन् । यो मुलुकको लागि गर्व एवं महिला अधिकारपक्षमा लागेकाहरुका लागि सम्मानको विषय हो । मलाई लाग्छ विश्वको राजनीतिक परिदृष्यमा समेत यसले एक महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने छ र कोषेढुङ्गाका सावित हुनेछ ।
भारतमा भ्याट कार्यान्वयन
रुप खड्का - भारतमा विभिन्न तहमा लगाइएका अनेक वस्तुगत करको सट्टा विस्तृत आधार भएको एउटै भ्याट लगाई भारतीय वस्तुगत कर प्रणालीलाई बढी सरल, सक्षम तथा पारदर्शी बनाउनुपर्ने प्रयास विगत चार दशकदेखि हुँदै आएको छ।
नेपालको खुलापनले बन्द समाज निर्माण गर्दैछ
प्रा.पिताम्बर शर्मा - खुलापनसँगै नेपालमा संस्थाहरू खुले र नियन्त्रणात्मक निकाय पनि बने। तर त्यसले सिन्डिकेट जन्मायो। खुलापनले बन्दपन सृजना गर्‍यो। आज शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्यलगायत प्रायः सबै क्षेत्रमा सिन्डिकेट छ। हामीले खुलापनका नाममा सिन्डिकेट निर्माण गर्‍यौं। राजनीतिक दलले त्यसको संरक्षण गरे।
डा. अरुणा उप्रेती - बाह्रबिसेको एउटा स्कुल जाँदा केही किशोरीको अनुहारमा अलि बढी नै कालो पोतो पाइयो। उनीहरूसँग चिकित्सकले अन्तर्क्रिया गर्दा छाला गोरो पार्ने भनिएको २५ रुपैयाँ पर्ने क्रिम लगाएपछि उनीहरूमा यस्तो समस्या आएको फेला पर्यो। स्कुलमा पढ्ने गहुँगोरो वर्णका ती किशोरीले ‘सेतो छाला’ को चाहना राखेका थिए।